Wareysi C/casiis Cali Ibrahim �Xildhiban�
4. Muddo intee la�eg ayaad ku jirtay mihnada qoraanimada, afkee ayaadse wax ku qortaa?, mise is leedahay waad ka gaartay heerkii aad dooneysay?
6. 20 sanno ayaa laga joogaa tan iyo intii ay burburtay dowladdii Soomaaliya, waxaa la burburay horrumarintii Afka Soomaaliga iyo dhamaystirka ama ebyidda naxwixiisa iyo qoraalkiisa, adiga ka qore ahaan, iyo dabcan qorayaasha kale ee aad garanaysid, kaalin intee la�eg ayaad ka geysateen horrumarinta afka iyo qoraalkiisa?
7. Marka laga hadlayo hurrumarinta Afka Soomaaliga iyo qoraalkiisa, howl intee la�eg ayaa Soomaalida u taalla?.
Jawaab;- Howlaha dhinaca horrumarinta & xassillinta afka Soomaaliga waa muhiimad laga dhowrayo guddiyadii baaba�ay ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay horay u sameysay soo celintiisa, sidaasi darteed waa arrin na sugeysa dhammaanyteen ka qeybgalkiisa.
Jawaab;- Waa jiraan waxaana howshaas iyada ah qabta shirkadda daabacaadda buugaagta ee Scansom Publishers ee fadhigeedu yahay dalka Sweden ee uu guddoomiyaha ka yahay Max�ed Sh. Xassan Nuur.
10. Inta la og yahay hal qaamuus ayaa laga qoray Afka Soomaaliga, ma jirtaa hawl kale oo la oran karo qaamuus ayay noqon kartaa oo Afka Soomaaliga laga sameeyey amaba hadda lagu gudo jiro, muhiimad intee la�eg ayayse leedahay in qaamuusyo waaweyn laga qoro Afka Soomaaliga si loo xifdiyo ereyo badan oo sii asal guuraya?.
Jawaab;- Sida luqadaha kale ee dalalka kale ee adduunka sida afka Ingiriiska, waa hal haddana sida loogu kala dhawaaqo waa kala duwanaan karaa, sidaasi darteed af guriga ma noqon doono mid dhaxal wareejiya kii qornaa ee Soomaaliga. Qoraalka afka Soomaaliga ee dowladdii dhexe ee Allaha u naxariistee Max�ed Siyaad Barre waa qeyb ka mid ah dhaxalkii ay kaga tagtay ummadda Soomaaliyeed.
12. Marka laga hadlayo Afka Soomaaliga, waxyaabaha ka dhiga mid raaga waa sugaanteena hodanka ah, si la mid su�aashii hore, waxaa jirta in dowladdii hore ay xoogga saartay suugaanta gobollo gaar ah, halka laga tagay ama la dafiray suugaanta gobollo badan oo dalka ka mid ah, ma jirtaa sifo lagu uruurin karo suugaantii laga tagay, door ceynkee ayayna arrintaasi ka qaadan kartaa �dib u heshiisiin rasmi ah� iyo waliba helis suugaan dadka oo dhan wada sheegan karaan lahaanshiyaheeda.
13. Soomaalida waa dad afka wax isku gaarsiiya, intooda badana waxbo ma qoraan, adiguna waxaad ka mid tahay dadka yar ee wax qora, adigoo ka duulaya erey bixinta labaad ee qoraalka loo yaqaano ee ah �Dhigaal�, taas oo ka turjumeyso wax keydsami kara si ka duwan hadalka oo la yiri �Haan ma buuxsho�, muhiimad intee la�eg ayuu qoraalka leeyahay?
Jawaab;- Qoraalka waa hannaanka ugu habboon ee ay ummadi wax isugu gudbin karto, sidaasi darteed, waxaa lagama maarmaan ah in loo howlgalo hannaanka ugu habboon ee wax lagu keydiyaa ama �Dhigaal� uu yeesho afkeena hooyo.
Jawaab;- Marka hore waxaan idinkaga mahadcelinayaa fursadda aad ii siiseen in aad wareysigan ila yeelataan, sidaasi darteed �Afka Soomaaliga & isticmaalkiisa� waa dariiqa kaliya ee dadka Soomaaliyeed ay kaga bixi karaan gunnimada oo ka hirgasha geyigeena Soomaaliya.